Nkwakọ ngwaahịa nke ihe dị iche iche maka ihe ọhụụ na-eme ka ọ dị jụụ - Potatoes News
Ndụ kachasị mma ma gosipụta ngwaahịa na ihe dị mma maka gburugburu ebe obibi. Ihe ịma aka nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ugbu a. A na-eji ihe eji eme ihe n'otu ihe eji eme Dutch Dutch ọhụụ ọhụụ ọhụụ.
“Ihe niile na - emetụta etu ndị ahịa si ahụta ngwa ahịa gị. Maka ahụmịhe kachasị mma nke ndị ahịa, nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa gị bụ ihe ị ga-echebara echiche nke ọma, ”ka onye na-ebupụta ngwa ahịa na-akọwa. “Nkwakọ ngwaahịa ahụ ga-adị mfe iji. Maka onye ahịa, kamakwa maka igwe eji arụ ọrụ, ma gha ekwe nkwa ndụ ngwaahịa gị.
Ọtụtụ mgbe, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nwere ọtụtụ plastik dị iche iche iji mezuo ihe nkwakọ ngwaahịa niile. Nke a na-eme ka ịmegharị ihe dị mgbagwoju anya. N'ihi na ezigbo imegharị ihe maka iji, film si mpịakọta na tupu kpụrụ akpa na mono ihe onwunwe e mepụtara. Nke a ga - ekwe omume site na mgbochi mgbochi oxygen dị elu ma yabụ dabara adaba maka ngwaahịa jụrụ oyi.
“Anyị nwere ike inye aka na ihe nkiri site na mpịakọta na akpa preformed nke enwere ike ịhazi ya na oke ọsọ, yana mgbochi foogu, resealability na adabara kpo oku na ngwa ndakwa nri. Anyị na-eche na usoro niile iji mepụta nkwakọ ngwaahịa mara mma ma na-arụ ọrụ. “
/ teknụzụ-nhazi-nduku /
Tags: mgbasa oziChọrọNgwugwu Dutchngwaahịa ọhụrụnkwakọUkwu
Creatmepụta nkwakọ ngwaahịa oriri sitere na ụlọ ọrụ agri-food residues
Nchegbu maka Coop ohuru na-akwakọba ihe ọkụkụ
PEI BAG - akpa nduku akwụkwọ maka ihe karịrị afọ 50
RPE gosipụtara akpa akpa potato ọhụrụ
ONYE AKA NA-ACH T TAMBU LWA WESTON / MEIJER, NETHLANDS
Nne na nna Aviko Cosun na-ebute ntakịrị ihe na-eweta afọ siri ike